Ezweni lethu sekuyindlela isidlo izoso ukuthi uvame okuphekiwe, kwenzekani imvelo. Ngokuvamile, inyama elula okugazingiwe threaded on skewers, akugcini, awukudla le nqubo kuhambisana eziningi. Kusolwa ukuthi ngendlela abantu babe nesikhathi kuhle elambile, kanye nesikhathi esidingekayo ukuze ukupheka, akufanele elahlekile ngeze.
Nokho, isidlo ethandwa enjalo idinga ukuba indlela ekhethekile ukumelela izitsha kanye Ungadla ezakha ngomongo walo gastronomic. Ukuze ukuxazulula esebenza izoso, udinga ukuhlola kungenzeka wokugaya ukudla, futhi, ngeshwa, kuhamba kuhambe kuphele. Okokuqala lokhu nakho kuzosiza izakhamuzi republic Transcaucasian abanayo isiko ukusetshenziswa of inyama ukudla okubabayo.
Ngakho, lokho kwasebenza a kebab shish eGeorgia noma Armenia? Njengomthetho, usoso, imifino kanye namakhambi. Ayikho isaladi Olivier, sandwich ne isoseji herring ethebuleni Caucasian akusho ziphila ndawonye nezinkawu nezingwenya inyama okugazingiwe amalahle. Sauce engcono kubhekwa tkemali, wabopha kahle ugcizelela ukunambitheka umusi ovela izithelo wamalahle ikhiphe iwundlu eyosiwe. ithoni yakhe omuncu akusho ukuphazamisa ukunambitheka umkhiqizo main, okuyinto ebaluleke kakhulu, lapho inyama muhle. Ukunqwabelana pepper noma uviniga - wakudala Iqhinga Caterers, abanye bezama ukufihla ngemuva kwabo "akuyona eyokuqala" freshness ukuthi ngezinye izikhathi bezama ukudlula njengesembozo izoso, ukuze ningabi njengabazenzisi kubo.
Ukungabi kwesikhathi kuletha abantu yesimanje kuze kube seqophelweni lokuthi lapho babekhonza khona kumuntu shish kebab isoso ezitolo ezivamile. Okuhle nakakhulu ukupheka ngokwakho kusuka pureed utamatisi okuphekwe fresh simmered ngamakhambi kanye kancane pepper. Kunoma ikuphi, usoso akufanele ngingabi nokhahlo kakhulu.
Manje ngenxa Hlobisa. Lowo kunazo zonke ukuthi sidla kuya kebab, salads zishiswa phezu imifino hlupha. Vele usike iklabishi mix it ne anyanisi, kancane ayoliswe amafutha sunflower. Dill, parsley kanye ukhukhamba lichaza ekwakheni wamukelekile. Bhaka isitshalo seqanda kungenzeka njengoba Georgian, uthathe ukudla nokubeka phansi ikhasi nehele futhi ucwecwe. Esimeni sesibili, basuke Kunconywa wenziwe kanye izaqathe, amazambane kanye izingcezu ezincane onion rings, ngakho-ke kuyoba juicier.
Inkosi labo bonke side izitsha - onion. Uya kahle konke wakhonza a kebab shish. Anyanisi kumele khona marinade, kanye design of the dish esiphelele. Kungaba kuhhavini phezu namalahle, marinate, umane nje usika kuphela izindandatho. Kubalulekile ukuze ngaphandle kwalo, futhi izoso akuyona izoso, kodwa inyama nje eyosiwe.
Hlobisa kufanele kube ongatheni, namazambane noma irayisi asifanele kakhulu. Inhloso ujabulele ukunambitheka ukudla, okuyinto ekhaya ukupheka zonke izakhamuzi zethu naye nzima noma kungenzeki nhlobo. Ngakho-ke etafuleni okwesikhathi kebab shish kufanele kube, nakuba zaziziningi, kodwa engagwegwesi. Salad, anyanisi zifakwe emanzini anosawoti bese nesweli isinkwa noma Pita isinkwa, imifino wabhaka ngokuthi utholakala ngebhodlela noma nojeke iwayini elimnandi elibomvu, nakhu zonke.
Njengoba for izitsha, ukuthi ngokuphambene nalokho ngemibono ethandwa, alahlwayo plastic amapuleti - hhayi ukhetho best. Umcimbi ezifana emkhakheni uhambo nge izoso, akwenzeki njalo, ngakho kufanele aphathe wena kanye nabangane bakho ngento mnandi. A option omkhulu - iqoqo zobumba, kuhlanganise imbiza.
Utamatisi Dachnik - utamatisi ekuseni